Web Design (All-in-one) Packages
Budget/Template Web Design (All-in-one) Packages
Standard Web Design (All-in-one) Packages
MCN ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်ဆင့်
Mandalay Certified Net မှ လတ်တလောပြုလုပ်ထားသော Website များ
Mandalay Certified Net မှ ဆောင်ရွက်နေဆဲ Website Project များ
Mandalay Certified Net မှ ဆောင်ရွက်နေဆဲ Software Project များ
Mandalay Certified Net (MCN) မှ လတ်တလောပြုလုပ်ထားသော Website များ
1. F1 Construction Company (www.f1myanmar.com)
ဆောက်လုပ်ရေး Construction Company များအတွက် တည်ဆောက်ဖန်တီးပေး ထားသော Website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Website တွင် မိမိ Construction Company ၏ အချက်အလက်များ၊ တည်ဆောက်ပေးမည့် Construction များ၊ Service များ၊ တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲ Construction လုပ်ငန်းများ စသည်တို့အား ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပေးနိုင်ပါမည်။
2. Channel Mandalay Website (www.channelmandalay.com)
မန္တလေး၏အထင်ကရနေရာများ၊ စားစရာများ၊ Shopping Mall Center များ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများ၊ တည်းခိုးစရာ Hotel များ စသည့် မန္တလေးနှင့် ပတ်သက်သည်များအားကဏ္ဍစုံလင်စွာ လေ့လာကြည့်ရှုနိုင်စေရန် အတွက်ဖန်တီးပေးထားသည့် Website ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
jQuery, HTML, Grunt
3. Technological University Kyaukse (www.kyauksetu.edu.mm)
တက္ကသိုလ် University များအတွက် တည်ဆောက်ဖန်တီးပေးထားသော Website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Website တွင် မိမိ တက္ကသိုလ် University ၏ နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ Programme တစ်ခုချင်းစီ အလိုက်အချက်အလက်များနှင့်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ၊ University ၏စဉ်ဆက်မပြတ် သတင်းများ၊ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသော အခြားသင်တန်းများ အစရှိသည်တို့ကိုပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါမည်။
4. Never Stop Travelling (www.nst-worldtour.com)
ခရီးသွားလာရာတွင်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံများ၏ ထင်းရှားသောအကြောင်းအရာများ၊ လည်ပတ်စရာ နေရာများ၊ ခရီးလမ်းကြောင်းများ၊ နိုင်ငံများ၏ ယဉ်ကျေးမှု Culture များ စသည်တို့အား စုံလင်စွာဖော်ပြပေးထားသည့် Tour Guide Website ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။